Tag: horseed | Martech Zone
In kasta oo helitaanka ilo xasiloon oo hoggaamiyeyaashu ay mar horeba wax weyn u tahay ganacsi kasta, ma keeni doonto cunto saxanka. Waad ka farxad badnaan doontaa haddii soo-celintaada iibintu ay u dhigantaa warbixintaada cajiibka ah ee Google Analytics. Xaaladdan oo kale, ugu yaraan qayb ka mid ah hoggaamiyeyaashan waa in loo beddelaa iibka iyo macaamiisha. Kawaran haddii aad heleyso tan badan oo leedh ah, laakiin iibin la'aan? Maxaad si sax ah u qaban weyday, maxaadse qaban kartaa
Shirkado yar ayaa leh awooda iibinta si ay ugu wacaan rajo kasta oo la heli karo. Taasi waxay ka dhigan tahay in badanaa loo daayo fursad ama dareen caloosha taas oo ah rajooyinka ay tahay inaad waqtigaaga badan ku qaadato. Inta badan maahan, tani waxay dhibaato u horseedaa shirkadaha. Waxay waqti ku lumiyaan rajooyin aan waligood badali doonin inta laga yaabo inay leeyihiin hoggaanno kulul oo diyaar u ah inay ganacsi sameeyaan. Nidaamyada jiilka tooska ah ee jiilka ayaa siiya qaab ka duwan meeshii